Indlu epholileyo enomphefumlo kunye nomtsalane - I-Airbnb
Indlu epholileyo enomphefumlo kunye nomtsalane
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguBetty
Indlu epholileyo kumbindi weNamsos. Indawo ezolileyo nepholileyo. Umgama kwiziko kunye nolwandle malunga neemitha ezingama-400. Indlu ikwidolophu endala yaseVika kwaye isuka kwi-1950. Iphuculwe kwaye yandiswa ngo-2009. Indlu ibekwe yintaba yedolophu iKlompen ethi ngokuhamba nje okufutshane ukuya phezulu ikunika. umbono enkulu yesixeko, ulwandle kunye neendawo eziyingqongileyo. Imbali yesixeko nayo inokufunyanwa phaya phezulu.
Ukuba uhlala endlwini yam, uya kuhoywa ngeyona ndlela ingcono. Uya kukwazi ukufumana isitshixo sakho kumnyango wangaphambili ukuba ukhetha ukuba seNamsos iintsuku ezininzi, okanye mna andikho endlwini. Kumgangatho wesibini kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye. Umgangatho we-2 ulungele usapho lwaba-4 apho abantwana banokulala ngebhedi. Kwigumbi elinye lokulala ibhedi i-150 cm ububanzi. Igumbi lokulala elikhulu linobubanzi bebhedi eyi-180 cm.
Kufuphi neziko ngexesha elinye njengoko ubumelwane buzolile kwaye buzolile